नोटबुकसूची: ईमेल मार्केटरहरूको लागि प्रेरणा डिजाइन र प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान Martech Zone
नोटबुकसूची: ईमेल मार्केटरहरूको लागि प्रेरणा डिजाइन र प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान
बिहीवार, जनवरी 8, 2015 बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
नोटलिस्ट आफूलाई ईमेल न्यूजलेटर खोज ईन्जिनको रूपमा बजार, 5००,००० भन्दा बढी प्रकाशकहरू मार्फत million मिलियन खोजी ईमेल न्यूजलेटर्सलाई अनुक्रमित गर्दै। यस्तै उपकरणहरू डिजाइनरहरूको लागि उत्कृष्ट छन जसले मुख्य ब्रांडहरू वा डिजिटल मार्केटरहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गर्न चाहान्छन् जसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू पठाउँदै छन् र कस्तो किसिमको न्यूजलेटरहरू र सम्झौताहरू सञ्चार भइरहेको छ भनेर हेर्न चाहन्छन्।
यदि तपाईं व्यवसाय हुनुहुन्छ कि परीक्षण गर्न संसाधन छैन भने, यी उपकरणहरू विशेष गरी मद्दत गर्न सक्दछ किनभने ठूला प्रकाशकहरूले उनीहरूको इ-मेलहरू सही बनाउनमा धेरै मेहनत गर्छन्!
नोटब्लिस्टसँग केहि सुविधाहरू र फाइदाहरू छन्:
उन्नत खोज र फिल्टरिंग - विषय, प्रेषक नाम, प्रेषक ईमेल ठेगाना, मुख्य पाठ वा यूआरएल द्वारा खोजी गर्नुहोस्। मिति, एलेक्सा श्रेणी र रंग द्वारा फिल्टर।
कीवर्ड ट्रेंडिंग चार्टहरू - हाम्रो अन्तर्क्रियात्मक टाइमलाइन दर्शकको साथ स्पट ट्रेन्डहरू, त्यसपछि नजिकबाट अवलोकन गर्न महत्वपूर्ण टाइमफ्रेमहरू र विशिष्ट मितिहरूमा जुम गर्नुहोस्।
दैनिक पाचन - समय बचत गर्नुहोस् र तपाईंको मनपर्ने ब्रान्डहरूको लागि नयाँ अभियानको दैनिक ईमेल डाइजेस्टको साथ अभियान कहिले पनि नछुटाउनुहोस्।
रियलटाइम अपडेटहरू - अभियानहरू पठाइएका तत्काल खोजीका लागि उपलब्ध छन्, र स्थायी रूपमा अभिलेख राखिएका छन्।
24 /7समर्थन - तिनीहरू यहाँ छन् जब तपाईंलाई तिनीहरूको आवश्यक पर्दछ, चाहे यो प्रश्नको लागि हो, बग रिपोर्ट वा उत्पादन सुझावको लागि।
तपाईं हाम्रो बिगतका मुद्दाहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ!
नोटालिस्टले प्रो पनि थपेको छ, एक वर्धित सेवा तह थप:
वास्तविक समय खोजी परिणामहरू - तत्काल अभियान आइपुग्छ, यो खोजी योग्य छ। यसबाहेक, खोजी परिणाम पृष्ठमा 'लाइभ अपडेट' बटनले अब तपाईंलाई नयाँ आउँदो आइटमहरूको लागि लगातार एड-हक खोजीहरू अनुगमन गर्न दिन्छ।
प्रत्यक्ष ड्यासबोर्ड - तपाइँका मनपर्ने खोजीहरूलाई बुकमार्क गर्नु भनेको चीजहरूको शीर्षमा रहन एक उत्तम तरिका हो, तर यदि तपाइँ ती सबै एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ भने यो उत्तम हुने छैन? प्रत्यक्ष ड्यासबोर्डले केवल यो गर्दछ: यसले तपाईंको सबै बुकमार्कहरूको लागि परिणामहरूलाई एकल टाइमलाइन दृश्यमा समाहित गर्दछ जुन नयाँ वस्तुहरू आईपुग्दा निरन्तर अद्यावधिक हुन्छ। यो रुचि न्यूजलेटर अभियानको लागि ट्विटर फिडको रूपमा सोच्नुहोस्।
वास्तविक समय ईमेल अलर्ट - केहि चीजहरू पर्ख्न सक्दैनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, केहि चीजहरू हराउन सक्दैनन्। वास्तविक समय सचेतका साथ, तपाई एक द्रुत ईमेल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब नयाँ अभियान तपाईको कुनै पनि बुकमार्कको लागि आउँछ।
चार्टि tools उपकरणहरू - खोजी परिणामहरूले तपाईंको खोज सर्तहरूको लागि-०-दिनको प्रवृत्ति देखाउँदै स्पार्कलाइन चार्टहरू समावेश गर्दछ। तर प्राय: सर्तहरू तुलना गर्न महत्त्वपूर्ण छ के ट्रेंडि up गर्दैछ र के चल्दैछ, वा ती मध्ये कुन चाहिं सब भन्दा लोकप्रिय छ भनेर हेर्न। भिजुअलाइजरको साथ, तपाइँ त्यो मात्र गर्न सक्नुहुन्छ र रेखा वा पाइ चार्टको रूपमा परिणामहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
टैग: प्रतिस्पर्धी ईमेल खोजीप्रतिस्पर्धी अनुसन्धानईमेलईमेल उत्तम अभ्यासहरूईमेल डाटाबेसईमेल डिजाइनईमेल उदाहरणहरूईमेल खोजी ईन्जिनईमेल परीक्षणसमाचार पत्रन्यूजलेटर डिजाइनन्यूजलेटर प्रेरणानोटलिस्ट
कसरी उत्तरदायी ईमेल डिजाइन र कहाँ मद्दत को लागी न्याय गर्न को लागी!